Ururi VOC (codka macaamilka) si aad uhesho filashada macaamilka ka dibna codso QFD (horumarinta waxqabadka tayada) si loo aqoonsado astaamaha muhiimka ah, lagu dhiirrigeliyo fikradda ah in la sii dejiyo, lagu dhammaystiro horumarinta fikradda iyadoo la adeegsanayo fikradda. Dhanka kale tusaalaha 3D waxay leeyihiin falanqaynta FMEA iyo DFM. Ku hel qalabka EPS saxda ah iyo qalabka faakiyuumka lagu sameeyo qalab casri ah oo ay ku jiraan mashiinka ka soo baxa korantada siligga iyo goynta CNC.
Abuur khariidad dariiqa saamaynta iyadoo la raacayo heerarka kala duwan, muraayadaha caarada ee cufnaanta la cayimay, isticmaal qalabka tijaabada ah ee loo yaqaan 'Cadex test' si aad ugu sameyso baaritaanka guriga dhexdiisa farsamo yaqaan shaybaar leh. Ku caddee nooc kasta shahaado si fiican loo aqoonsan yahay. shaybaarka
Samee tilmaamaha shaqada iyo SOP (nidaamka hawlgalka caadiga ah) oo leh dulqaad soosaar qeexan. Samee qorshe lagu xakameynayo Nidaamka si loo hubiyo tayo sare leh. Muuji horumarka horumarka ee guddiga scrum, si dhow ula soco horumarka adoo isticmaalaya liiska OKR, kulan istaag maalinle ah iyo jadwalka shaxda Gantt.
Ganacsi kasta ku samee ganacsi waqtigiisa qiimo lehna tayo sare leh.
Waxaan had iyo jeer diirada saarnaa cilmi baarista hal abuurka ah oo kaliya habka soosaarka horumarsan laakiin sidoo kale qalab cusub iyo tikniyoolajiyad, marka la eego qeybaha farsamada, waxaan soo saarnay qeyb silikoon ah oo lagu xirey faashad jilicsan si loo sameeyo dhaqdhaqaaq siibtero ah si uu u soo nuugo tamarta inta uu shilka socdo kana ilaaliyo madaxa inuu wax yeelo silikoonku saameyn kuma yeelanayo raaxo-qabsiga oo haynta qaboojinta inta lagu jiro fuulitaanka.
Bayoolaji ahaan waa u go'an tahay ilaalinta deegaanka, waxay noqotay eray kulul oo loogu talagalay waaritaanka, waxaan soo saarnay biomaterials badan (sida antibacterial, bamboo iyo walxaha dib loo warshadeeyay) si loo yareeyo isticmaalka shidaalka foosha.
Suufka isku dhafan oo leh silikoon.
Muuqaal shaqeynaya heer sare.
Daawada antibacterial / BAMBOO
Difaac microbes iyo ur.
Waara oo raaxo leh.
Qalalan oo odro la'aan.
TPU isku xirnaanta aan xuduud lahayn.
Isku xirnaansho la'aan.
Xoojinta PC / PP.
0.25mm - 0.5mm cashada isku xirka PC khafiifka ah.
Qaabaynta shaashad raaxo leh.
Hawlaha xajinta waxay ka caawineysaa yareynta tamarta saameynta wareega.
Dahabka dunta leh ee dunta lagu xidho
3D saameynta webbing
Dunta dunta leh ee dunta lagu duubay
Shabakada polyester-ka ee dib loo isticmaali karo
Bakteeriyada lidka ku ah bakteeriyada